Tag: ọnụego ibiaghachi | Martech Zone
Tag: ibiaghachi ọnụego
Gini bu ugwo di? Kedụ ka ị ga - esi meziwanye ọnụego gị?
Ọnụ ego bounce bụ otu n'ime ndị KPI ndị ahịa dijitalụ na-etinye oge dị ukwuu na nyocha na ịnwa imeziwanye. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe isi mmalite bụ, ịnwere ike ihie ụzọ n’otu ị chọrọ isi meziwanye ya. Aga m agagharị na nkọwa nke ọnụego bounce, ụfọdụ nuances, na ụzọ ụfọdụ ị ga - esi meziwanye ọnụego gị. Ibiaghachi Rate Definition A ibiaghachi bụ otu-na peeji nke nnọkọ na gị na saịtị. Na
Thursday, June 9, 2016 Fraịdee, June 10, 2016 Douglas Karr
Marketingre ahịa ọdịnaya bụ ihe ejirila, n'okpuru nyocha, na KPI buzzword ahịrịokwu na azụmaahịa nke gara na nkwubi okwu ya, ndị ahịa azụmaahịa na-ede blọgụ banyere isiokwu ndị na-enweghị mmasị iji jikọọ ma ọ bụ mee ka weebụsaịtị ha dị ọhụrụ. Ọdịnaya abụghị ụzọ ruo ọgwụgwụ afọ ole na ole gara aga Google hụrụ n'anya ịnye weebụsaịtị buru ibu yana ọdịnaya ndị ọzọ. Nke a na - eduga ndị na - ede blọgụ, ndị mmekọ, na ndị nwe azụmaahịa na - achọpụta mediocre ọdịnaya ad nauseam, yana nkwa nke ọdịnihu